Global Voices teny Malagasy » Blaogy Boliviana – fanendrikendrehana an’i Etazonia sy ny fifandraisana amin’i Shily · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 10 Mey 2019 3:27 GMT 1	 · Mpanoratra Eduardo Avila Nandika Harentsoa Tsiky Rakotoson
(Lahatsoratra teny anglisy tamin'ny 30 marsa 2006)
Tsy any Bolivia ihany no ahitana fanapoahana baomba ataon'ny mpampihorohoro. Izany no nahatonga ireo karazana tombatombana nipoitra raha nisy fipoahana baomba roa tao amin'ny trano fandraisam-bahiny  tany an-drenivohitra La Paz. Boliviana roa no maty tamin'izany voina izany ary olona roa ihany koa no voatazona ankehitriny. Nanomboka nanao fikarohana an'aterineto  momba ireo karazana solon'anarana ampiasain'ny olom-pirenena amerikanina nogadraina noho ny heloka bevava ny tontolon'ny bilaogy Boliviana. Iray amin'ireo nahita an'i Claudius Lestat de Orléans y Montevideo, alias Tristan Jay Amero i Jonathan ao amin'ny Journal of Bolivian Business and Politics , ao amin'ny fanehoan-kevitra nalefa tao amin'ny blaogy MABB.
Nampiseho miharihary anefa ireo mpanampoaka baomba teo aloha fa tsy nisy idiran'ny resaka politika iny baomba iny , nosoratan'i Javier tao amin'ny blaogy Una Revisión de Todo Un Poco (ES) izany. Nihoa-pefy ny fanambaran'ny filoha Evo Morales, hoy ny fihevitry ny ankamaroan'ny bilaogera, raha nanontany tena i Morales hoe nalefan'i Etazonia ve ireo mpanampoaka baomba. Nanoratra ny tombatombana lasa aloha loatra maro hafa  nolazain'ny manampahefam-panjakana hafa koa i Sebastian Molina ao amin'ny Plan B hoe misy “firenena” hafa tao ambadiky ny fanafihana ary nisy fikasana hanozongozona ny governemanta ary hampivadika ny raharaham-pitsarana ny filoha teo taloha Gonzalo Sanchez de Lozada mihitsy aza. Nanoratra ny fihetseham-pon'i Etazonia  izay voaendrikendrika ho fototry ny heloka i Alvaro Ruiz Navajas avy ao amin'ny Off Topic. Niantso ny ambasadin'ny Bolivia any Washington ny mpiandraikitra amerikanina mba hilaza amin'izy ireo ny ahiahiny manoloana ny fanendrikendrehina.
Manontany tena ny raha nisy fifandraisainy tamin'ny zava-nitranga tamin'ny andron'ny ranomasina iny fipoahan'ny baomba iny, izay nanaovan'i Bolivia fahatsiarovana ny fahaverezan'ny zarataniny lasan'ny mpifanolo-tsisitany aminy dia i Shily. Nanoratra ny eritreriny momba ity andro ity ny bilaogera Boliviana sasantsasany, toa an'i Hermany. Nanoratra ny fahatsapana alahelo sy ny fahatsapana tsy mahazaka mihiboka  izy tao amin'ny blaogy Carpe Diem (ES). Manampy izany i Rolando Lopez, mpanoratra ny Rocko Weblog (ES), nahatadidy am-pihetseham-po ny maherifon'ny firenena Eduardo Avaroa , izay namoy ny ainy tao amin'ny adin'i Pasifika nifanandrinana tamin'i Shily. Amin'ny maha-farany azy mijoro, toy izao ny teny farany nataony araka ny tatitra: ” Hitolo-batana? Avelao ny renibenareo no hitolo-batana, oadray lety e!
Hifandray amin'ny resaka ranomasina hatrany ny fifandrasain'ireo firenena roa ireo. Nampitaha famantarana ara-demaografika sy ara-toekarena i Mario Ronald Duran Chuquima ao amin'ny Palabras Libres. Nihevitra izy fa ny etona voajanahary boliviana no mety ho “masoivoho tsara indrindra”  eo amin'ny firenena, izay manatona kokoa amin'ny marimaritra iraisaina amin'ity raharaha ity, satria io no loharanon-karena voajanahary ilain'i Shily.
Farany, nahita gazetiboky mitondra ny lohateny hoe “Palabras MAs (ES) ” (teny maro kokoa), izay mamelabelatra ny bilaogy sy ny fitaovana vaovao fampitam-baovao ampiasain'ny ankamaroan'ny mpanoratra boliviana mba hamoahana ny ao an-tsaina sy ny heviny (ES)  ny bilaogim-piarahamonina boliviana Blogs de Bolivia. Kanefa nanontany tena ny amin'ireo mpanoratra tsy voatery navoaka sy ny antony tsy nanononana azy ireo i Miguel Esquirol, izay nanoratra tao amin'ny habaky ny Blogs de Bolivia.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/05/10/138225/
 nisy fipoahana baomba roa tao amin'ny trano fandraisam-bahiny: http://www.cnn.com/2006/WORLD/americas/03/22/Bolivia.blasts.reut/index.html?section=cnn_latest
 nanao fikarohana an'aterineto: http://www.barrioflores.net/weblog/archives/2006/03/a_little_bit_ab_1.html
 Journal of Bolivian Business and Politics: http://b2bolivia.blogspot.com/
 tsy nisy idiran'ny resaka politika iny baomba iny: http://tomorrow123.blogspot.com/2006/03/terror-por-qu.html
 tombatombana lasa aloha loatra maro hafa: http://planb.mundoalreves.com/?p=172
 ny fihetseham-pon'i Etazonia: http://aruiznavajas.blogspot.com/2006/03/just-useful-idiot-update-2.html
 ny fahatsapana alahelo sy ny fahatsapana tsy mahazaka mihiboka: http://carpediem.mundoalreves.com/?p=29
 nahatadidy am-pihetseham-po ny maherifon'ny firenena Eduardo Avaroa: http://rocko.blogia.com/2006/032301-eduardo-avaroa-un-heroe-revisitado.php
 ny etona voajanahary boliviana no mety ho “masoivoho tsara indrindra”: http://bolivianueva.blogspot.com/2006/03/bolivia-y-chile-dos-realidades.html
 Palabras MAs (ES): http://www.palabrasmas.org/
 ny fitaovana vaovao fampitam-baovao ampiasain'ny ankamaroan'ny mpanoratra boliviana mba hamoahana ny ao an-tsaina sy ny heviny (ES): http://blogsbolivia.blogspot.com/2006/03/escritores-con-blog.html